Lufthansa Boka rinogadzirira rakasimba 2021 kudiwa kwekukura mushure mekushandisa kurasikirwa kwe5.5 bhiriyoni euros | Ndege
Location: musha » Kutumira » Airlines » Lufthansa Boka rinogadzirira rakasimba 2021 kudiwa kwekukura mushure mekushandisa kurasikirwa kwe5.5 bhiriyoni euros
Lufthansa Boka rinogadzirira rakasimba 2021 kudiwa kwekukura mushure mekushandisa kurasikirwa kwe5.5 bhiriyoni euros
Kurambidzwa kwekufamba uye kuisa wega kwakakonzera kusarongeka kwakasiyana mukuda kwekufamba nendege
Kuderedzwa kwemitengo kunoenderera nekukasira uye kushandisa mari yemadhiza yakatemerwa kumatunhu anosvika mazana matatu emamirioni pamwedzi mukota yechina
Carsten Spohr: "Kuzivikanwa kwepasi rose, kudzivirirwa kwedigital uye zvitupa zvekuyedza zvinofanirwa kutora nzvimbo yekurambidzwa kwekufamba uye kuisa wega"
Lufthansa Group Airlines yakagadzirirwa kupa makumi manomwe ezana muzana emagetsi zvakare munguva pfupi uye inovavarira kupa vashandi zviuru zana maonero erefu.
Carsten Spohr, CEO weDeutsche Lufthansa AG, anoti: “Gore rapfuura raive rakaomesesa munhoroondo yekambani yedu - kune vatengi vedu, vashandi vedu nevatinotigoverana navo. Kurambidzwa kwekufamba uye kuisa wega kwakakonzera kusarongeka kwakasiyana mukuda kwekufamba nendege. Parizvino inozivikanwa pasi rose, kubaiwa nedhijitari uye zvitupa zvekuyedza zvinofanirwa kutsiva kurambidzwa kwekufamba uye kugara wega kuti vanhu vakwanise kushanyira mhuri neshamwari, kusangana nevanoshanda navo kana kudzidza nezve dzimwe nyika netsika. ”
Tichitarisa kune ramangwana kukura kweiyo Lufthansa Boka, Carsten Spohr akati: "Dambudziko rakasarudzika riri kukurumidza kuita shanduko mukambani yedu. 2021 richava gore redimensioning uye yemazuva ano kwatiri. Iko kutarisisa kucharamba kuri pakuchengetedza: Tiri kuongorora kuti ndege dzese dzinopfuura makore makumi maviri neshanu dzicharamba dziri pasi zvachose. Kubva zhizha zvichienda mberi, isu tinotarisira kudiwa kwekutora zvakare nekukurumidza kana miganho inodzora yekufamba ikaderedzwa nekumwe kuburitswa kwekuyedzwa uye majekiseni. Isu takagadzirira kupa kusvika ku25 muzana yeedu pre-dambudziko kugona zvakare munguva pfupi sezvo kudiwa kuri kuwedzera. Tine boka diki, rinotetepa uye rinogadzikana reLufthansa Group, tinoda kuchengetedza chinzvimbo chedu chinotungamira pasirese nekuchengetedza mabasa evashandi vanosvika zviuru zana munguva refu. ”
Kudiwa kwakadonha zvakanyanya mugore redenda reCorona uye nezvirambidzo zvekufamba zvakabatana. Mari inowanikwa kuLufthansa Boka yakawira ku13.6 bhiriyoni euros muna 2020 (gore rapfuura: 36.4 bhiriyoni euros). Kunyangwe ichikurumidza uye yakawandisa kuderedzwa kwemitengo, iyo Lufthansa Boka yaifanirwa kuudza Yakagadziriswa EBIT yemamiriyoni 5.5 emamiriyoni (gore rakapfuura: purofiti ye2.0 bhiriyoni euros). Iyo Yakagadziriswa EBIT margin yaive kubvisa 40.1 muzana (gore rapfuura: pamwe 5.6 muzana). Iyo yekushandisa mari yekudonha mukota yechina ye2020 yaive yakatenderedza 300 mamirioni euros pamwedzi. Kufambira mberi mukugadzirisa patsva kunogumira kukonzeresa kwemamiriro ekuwedzera kwedenda pane mihoro. Mari dzevashandi dzakadzikiswa zvakanyanya kuburikidza nekudzikiswa kwevashandi, zvibvumirano zvematambudziko nevashandi vezvemagariro uye nekushanda kwenguva pfupi. Pakupera kwegore ra2020, huwandu hwevashandi hwaive 110,000, kutenderedza 20 muzana yakaderera pane yegore rapfuura. Iyo yakashumwa kurasikirwa kweEBIT kwaive kwakatenderedza 1.9 bhiriyoni euros yakaderera pamadhora 7.4 bhiriyoni euros, kunyanya nekuda kwekushomeka kwekunyora-pasi kwendege nekufarirwa. Mari yeNet yakasvika pakubvisa 6.7 bhiriyoni euros (gore rapfuura: 1.2 bhiriyoni euros).
Lufthansa Cargo inozadzisa rekodhi mhedzisiro
Mukupesana nendege dzevatakuri, iro boka reboka revatakuri rakabatsirwa nekukwira kwekudiwa pamusoro pegore. Yakavakwa nekuwedzera kwakasimba muvhareji goho mukati mekuramba ichidikanwa zvakanyanya, Lufthansa Cargo yakawana mhedzisiro rekodhi neAdjusted EBIT yemamirioni mazana manomwe nemakumi manomwe nemaviri euros (gore rapfuura: mamirioni euros) kunyangwe paine kuderera kwemazana makumi matatu muzana
Mari inoshandiswa paLufthansa Boka yakadzikiswa neanenge maviri-matatu matatu pagore muna 2020 kusvika ku1.3 bhiriyoni euros (gore rapfuura: 3.6 bhiriyoni euros), kunyanya pahwaro hwezvibvumirano zvakakura nevagadziri vendege. Izvi zvinopa kumiswa kwekuendeswa kwendege muna 2021 nekupfuura, kuitira kuti mari yemari yegore negore ive yakaderera pane zvakarongwa pakutanga zvakare mumakore anotevera. Yakagadziriswa yemahara yemari kuyerera yaive yakaipa 3.7 bhiriyoni euros (gore rakapfuura: 203 mamirioni euros), aine anenge 3.9 bhiriyoni euros akabhadharirwa tikiti kudzoreredza chete. Izvi zvakagadziriswa ne1.9 bhiriyoni euros mune matsva matsva. Iko kubuda kwemari kwakasara kwakatemerwa nekutonga kwakasimba kwezvinhu zvinotambirwa uye zvinobhadharwa.
Chikwereti cheNeti chinosanganisira zvikwereti zvekubhadhara zvakawedzera kusvika panosvika mabhiriyoni e9.9 euros (gore rapfuura: 6.7 bhiriyoni euros). Zvikwereti zvepenjeni zvakawedzera ne43 muzana kusvika 9.5 bhiriyoni euros (gore rapfuura: 6.7 bhiriyoni euros), kunyanya nekuda kwekudonha kwemutero wakashandiswa kudzikisira zvisungo zvepenjeni kusvika ku0.8 muzana (gore rapfuura: 1.4 muzana).
Kubva muna Zvita 31, 2020, iro Lufthansa Boka raive riine mari inosvika zviuru gumi nezviuru mazana matanhatu ema euro, ayo 10.6 bhiriyoni euros ane chekuita neisina kushandiswa nzira dzekusimudzira hurumende. Pakupera kwa5.7, iro Lufthansa Boka rakange ratora mari yekusimudzira yehurumende yeanosvika 2020 bhiriyoni euros, ayo 3.3 bhiriyoni euros akatobhadharwa panguva ino.
Muhafu yepiri ye2020, iro Boka rakabudirira kudzoka kumusika wemari uye rakaunganidza mari ye2.1 bhiriyoni euros kuburikidza nezvisungo nemari yezve ndege. Uye zvakare, muna Kukadzi 4 iro Boka rakaisa mabondoni maviri aine huwandu hwakazara we1.6 bhiriyoni euros, mari yacho yaishandiswa pakati pezvimwe zvinhu kubhadhara chikwereti cheKfW chemamirioni gumi emadhora. Pakazara, iyo-refu-nguva refinancing yezvese zvikwereti zvemari inokodzera muna 1 saka inochengetedzwa.
“Zvazvino zviitiko zvave kuratidza kuvimba kwakaita musika nekambani yedu. Lufthansa Group rakapihwa mari zvakanaka kupfuura gore ra2021. Izvi zvinobatsirwawo nezvinhu zvakange zvisati zvamboshandiswa zvegadziriro, izvo zvatinogona kutora pazvinenge zvichidikanwa kusimbisa bharanzi, ”akadaro Remco Steenbergen, Chief Financial Officer weDeutsche Lufthansa AG.
Traffic manhamba e2020
Muna 2020, ndege dzendege dzeLufthansa Group dzakapa dzinenge chikamu chimwe muzvitatu chendege kana chinzvimbo (chinowanikwa makiromita ezvigaro) e31 muzana zvichienzaniswa negore rapfuura. Pamamiriyoni makumi mana nemazana mana, huwandu hwevaifamba hwaive makumi maviri neshanu muzana yegore rapfuura, zvichikonzera huwandu hwezvikamu makumi matanhatu nenomwe kubva muzana, 36.4 muzana mapoinzi ezasi kupfuura gore rapfuura.
Nekuda kwekubviswa kwedumbu rekutakura nhumbi panhandare dzevatakuri, huwandu hwezvinhu hwakaderera nezvikamu makumi matatu nepfumbamwe. Makiromita ekutakura akatengeswa akadonha ne39 muzana kusvika 31 mamirioni ematani panguva imwe chete. Panguva imwecheteyo, icho chinorema chakakwira ne7,390 muzana poindi kusvika 8.4 muzana. Avhareji goho rakakwira neakakomberedza 69.7 muzana nekuda kwekushomeka kwekutenga.
Lufthansa Boka rakabatsirwa kubva kune yayo hub system. Kusiyana nevakwikwidzi, avo vanongopa zvinongedzo-zve-poindi, ndege dzeLufthansa Group dzakakwanisa kubatanidza huwandu hwetraffic hwakadzika kumahabhu avo uye nekudaro vanochengetedza kubatana kwakakosha. Mukuwedzera, kushamwaridzana kwepedyo pakati pevatakuri nevatakuri vemitoro panzvimbo dzacho kwakaita kuti zvikwanisike kuwana cheni dzepasirese.
Mwaka wadarika, huwandu hwevashandi hwakaderera neinenge zviuru makumi maviri nesere. MuGerman, mamwe mabasa zviuru gumi achaderedzwa kana iwo anoenderana nemitengo yevashandi anofanirwa kubhadharwa. Boka rengarava richaderedzwa kusvika ndege mazana matanhatu nemakumi mairi muna 28,000. Pakati nepakati pemakore gumi, iro Boka rinotarisira kuti huwandu hwesimba hunodzokera ku10,000 muzana. Uye zvakare, iro Boka riri kuongorora kuraswa kwemabhizimusi ayo anongopa madiki synergies nebhizimusi repamoyo.
Pese panobviswa zvirambidzo, kubhuka kunowanzo wedzera zvakanyanya munzvimbo inofamba traffic. Kwegore rose ra2021, iro Boka rinotarisira kugona kupihwa kusvika pamakumi mana kusvika makumi mashanu muzana emazinga e40, uye tarisiro inoramba iripo yekuti kuyerera kwakanaka kwemari kuchazogadzirwa kana huwandu hwekupa huri pamusoro pe50 muzana. Nekuwedzera kwekurongeka kwebhizimusi rekushanya uye kuenderera kwakasimba kweLufthansa Cargo, iro Boka riri muchinzvimbo chekushandisa mikana yemusika munguva pfupi. Kuwedzera mune chikamu chemitoro kunoenderera.
Ivhareji pamwedzi yekushandisa mari yekurasa, kusanganisa shanduko yemari inoshanda, mari yemari uye imwe-yekugadzirisa nekugadzirisa mari, inotarisirwa kuganhurirwa kumamirioni mazana matatu emadhora mukota yekutanga ya300.
“Nekuda kwemaitiro edu emari achangodarika, tine mari yakakwana yekumisidzana nenzvimbo yemusika inoramba iri yakaoma. Nhanho inotevera ndeyekusimbisa bhalanzi redu uye kudzikisa chikwereti. Mukuita kudaro, isu tinodzora yedu mitengo kuburikidza nekubudirira kugadzirisa. Dambudziko redu uye manejimendi manejimendi atora mhedzisiro nekukurumidza kupfuura zvanga zvakarongwa pakutanga Panguva imwecheteyo, bhizinesi redu rawana zvishoma nezvishoma kupfuura zvataitarisira pakutanga. Kunze kwekubhadharira hurumende mari yekudzikamisa, chinangwa chedu nzira yezvemari ndechekuti misika yezvemari iongorore kukodzera kwedu kukero rekudyara munguva yepakati, "anodaro Remco Steenbergen.
Lufthansa Boka rinotarisira kurasikirwa kwekushanda, kuyerwa maererano neAdjusted EBIT, kudzikira muna 2021 kupfuura mugore rapfuura.
KfW Lufthansa Lufthansa Cargo Lufthansa Boka
Kufamba kweUS: Chete 12% yevaAmerican vanoronga rwendo rwekuvhuvhu
PATA inodoma zita rayo 2021 Chiso cheRamangwana